Pradesh News | » उमेर अन्तरल के फरक पार्छ दम्पतीबिचको संम्बन्धमा? उमेर अन्तरल के फरक पार्छ दम्पतीबिचको संम्बन्धमा? – Pradesh News
जीवनशैली मुख्य खबर
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको । धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी रु यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्-श्रीमतीको १ बर्षका जेठो-कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ र?